But tomorrow i hada- 英語 - ビルマ語 翻訳と例
検索ワード: but tomorrow i had about mark (英語 - ビルマ語)
ကျွန်တော်/ကျွန်မ မနေ့က ဖျားတယ်
ကျွန်ုပ်၏ ရင်ဘတ်တွင် စူးခနဲအောင့်ပြီး နာကျင်နေပါသည်
ပေးတော်မူသော ဩဝါဒများကို နားထောင် သောအားဖြင့် အားရပါ၏။
သို့ဖြစ်၍ပေါလုသည်မိမိနာမ၌ ဗတ္တိဇံကို ပေးသည်ဟု အဘယ်သူမျှဆိုစရာအကြောင်းမရှိ။
ဣသရေလအမျိုးသားရောက်ရာ တကျွန်း တနိုင်ငံအရပ်ရပ်တို့၌ ရှုတ်ချသော ငါ၏နာမမြတ်ကို ငါနှမြော၏။
Before they openedacriminal case against me I had appeared many times on Uzbek TV.
သူတို့က ကျွန်မကို ရာဇဝတ်မှုနဲ့ တရားမစွဲခင်တုန်းက ဥဇဘက်ရုပ်သံတွေမှာ ကျွန်မ မကြာခဏ ပါခဲ့ပါတယ်။
ငါရေးစရာအကြောင်းအများရှိသော်လည်း၊ မှင်နှင့် မှင်တံဖြင့် ရေးခြင်းငှာ အလိုမရှိ၊
ထိုအလိုကိုယုဒလူတို့သည် ဆီးတားသောအခါ၊ ကဲသာဘုရင်၏ အယူတော်ခံပါမည်ဟုအကျွန်ုပ် ဆိုရ၏။ ထိုသို့ဆိုသော် အမျိုးသားချင်းတို့ကို အပြစ်တင်စရာ တစုံတခုရှိသောကြောင့်ဆိုသည်မဟုတ်။ ထိုကြောင့် သင်တို့ကိုမြင်၍ နှုတ်ဆက်ခြင်းငှါ အကျွန်ုပ်ခေါ်ပါပြီ။
ငါသည်သင့်ကိုသနားသကဲ့သို့ သင်သည်လည်း ကျွန်ချင်းကို မသနားအပ်သလောဟု ဆိုလျက်၊
အကယ်စင်စစ် အသက်ရှင်သောသူတို့၏ နေရာတွင်၊ ထာဝရဘုရား၏ ကျေးဇူးတော်ကို ငါတွေ့မြင် ပြီဟု ယုံမှတ်စွဲလမ်းခြင်းရှိ၏။
သို့မဟုတ် အချိန်နေ့လမစေ့မှီ မွေးသောသူငယ်၊ အလင်းကို မမြင်ရသောသူငယ်ကဲ့သို့ ငါပျက်စီးရပြီ။
So I had the idea to makeaproject whereby I show in pictures how the love ofachild for his parents is irreplaceable.
"ကျွန်တော့်ရဲ့ ဓာတ်ပုံက ဆီးရီးယားနှင့် ဆိုင်တယ်ဆိုတာ လုံးဝ မမှန်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကို လူတွေက ဒီလို မလိမ့်တစ်ပတ်လုပ်ကြပုံကို အံ့အားသင့်မိပါတယ်။
ထိုသို့ အကျွန်ုပ်သည် မဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်၍၊ အကျွန်ုပ်ကိုအမိဝမ်းထဲမှ သင်္ချိုင်းသို့ ဆောင်ပို့ရကြ၏။
အကျွန်ုပ်သည် ရန်သူတို့ကို လိုက်ဖျက်၍၊ သူတို့ကို မပယ်ရှင်းမှီ တိုင်အောင်မပြန်ပါ။
အိုအဘ၊ ဤကမ္ဘာမတည်မရှိမှီအထံတော်၌ အကျွန်ုပ်ခံစားရသောဘုန်းအသရေနှင့် ယခုတွင်လည်း အကျွန်ုပ်ကိုအထံတော်၌ ချီးမြောက်တော်မူပါ၏။
ပြန်စဉ်အခါ မြစ်နားနှစ်ဘက်၌ များစွာသော အပင်တို့ကို ငါမြင် ၏။
ဆုတောင်းသော အမှုမပြီးမှီ မြွက်ဆိုစဉ်တွင် ယခင်ဗျာဒိတ် ရူပါရုံ၌ ထင်ရှားသောသူ၊ ဂါဗေလသည် လျင်မြန်စွာ ပျံ၍လာသဖြင့် ညဦးယံ ပူဇော်ချိန်၌ ရှိရာသို့ ရောက်၍
ငါသည် ချိုးငှက်ကဲ့သို့ အတောင်ကို ရပါစေ သော။ ထိုသို့ရလျှင် အခြားသို့ပျံသွား၍၊ ငြိမ်ဝပ်လျက် နေလိမ့်မည်။
ထိုသို့နေရိသား ဗာရုတ်၌ စာချုပ်ကို အပ်ပြီးမှ၊ ထာဝရဘုရားအား ငါဆုတောင်းသော ပဌနာစကား ဟူမူကား၊
innebandy (スウェーデン語>英語)ogni ora o frazione d'ora di ritardo (イタリア語>英語)sina mail (英語>ドイツ語)mash up (イタリア語>ノルウェー語)chaahe ho ya na ho (ヒンズー語>英語)kuma tam (トルコ語>英語)white wine in carafe ½ litre (英語>イタリア語)papera (スペイン語>英語)tu fais quoi de beau ce soir ? (フランス語>英語)when u r going to jaipur (ヒンズー語>英語)ex agris concurrite (ラテン語>フランス語)televisione (イタリア語>韓国語)one life one love (英語>ラテン語)dant ko english ma kia kehte hai (ヒンズー語>英語)morsiesorsi (イタリア語>英語)indhana winva gaiti mori saiyaan (ヒンズー語>英語)psykosocial (スウェーデン語>英語)stadsowerhede (アフリカーンス語>英語)kes emak (マレー語>アラビア語)sensation (英語>バスク語)chu woa hae yo (韓国語>英語)i'm good, yourself (スペイン語>英語)helårsanställd (スウェーデン語>英語)son las ocho y cuarto de la noche (スペイン語>英語)pili na kayo (タガログ語>英語)